Khwopa Engineering College - Event: Chess Students Boys' Singles –2076
Chess Students Boys' Singles –2076
2075 ashadh 06 to 08
2076 Ashadh 06 to 08
यो प्रतियोगिता World Chess Federation को नियम अनुसार खेलाईनेछ ।
यो प्रतियोगिता नकआउट खेलाइने छ ।
प्रतियोगितामा भाग लिन मिति २०७६ असार ०४ गते दिउसो ३ः०० वजे भित्र अनिवार्य नाम दर्ता गराइ सक्नु पर्नेछ ।
सहभागी विद्यार्थीहरु अनिवार्य कलेज T-shirts मा आउनु पर्नेछ । र जुता अनिवार्य sports shoes लगाउनु पर्नेछ ।
कुनै पनि Event संचालन गर्न कम्तिमा पनि ५ टिम सहभागि भएको हुनु पर्नेछ ।
परिचय पत्र विना हलमा प्रवेश निषेध हुनेछ । आयोजकले मागेको समय परिचय पत्र देखाउन नसके उक्त विद्यार्थीले खेल छाद्नु पर्नेछ ।
खेल तोकेको समयमा देखि सुरु हुने भएकोले दिएको समय भन्दा ३० मिनेट अगाडी नै आयोजक समिति सामुने रिपोटिङ्ग गर्नु पर्नेछ ।
खेलमा विवाद गर्न पाउने छैन । भएको खण्डमा निर्णायकको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
एक पटक नाम दर्ता गरिसकेपछि नाम फेर्न पाउने छैन ।
प्रतियोगिताको अवधिभर खेलाडी विद्यार्थीहरुवाट कुनै अभद्र ब्यवहार,गरेको पाइएमा तथा प्रतियोगिताको नियमहरुको पालना नगरेको ठहरेमा नियमानुसार कार्वाही हुनेछ ।
आवश्यकता अनुसार आयोजक कमितिले नियमहरुमा थपघट गर्न सक्नेछ ।
प्रतियोगिताको निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार आयोजक समितिलाई हुनेछ, सो समितिको निर्णय पूर्ण स्विकार्य हुनुपर्नेछ ।
पुरस्कार विवरण ः
Winners 1st : Gold Medal, Certificates
1st Runners up 2nd : Silver Medal, Certificates
2nd Runners up 3rd : Bronze Medal, Certificates
If you are going to registration for Single's events.Then follow the Example :
Code (CRN/LN/SN) : your Id. no. (700641, (I.D. Roll No.))
Contact No : your contact NO (98415788)
कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Girls' Singles –2076 कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Boys' Singles –2076 Chess Students girls' Singles –2076 Chess Students Boys' Singles –2076 Table Tennis(टेबल-टेनिस) Girls' Singles – 2076 Table Tennis(टेबल-टेनिस) Boys' Singles – 2076
Other Events कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Girls' Singles –2076 कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Boys' Singles –2076 Chess Students girls' Singles –2076 Chess Students Boys' Singles –2076 Table Tennis(टेबल-टेनिस) Girls' Singles – 2076 Table Tennis(टेबल-टेनिस) Boys' Singles – 2076
कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Girls' Singles –2076
कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Boys' Singles –2076
Chess Students girls' Singles –2076
Table Tennis(टेबल-टेनिस) Girls' Singles – 2076
Table Tennis(टेबल-टेनिस) Boys' Singles – 2076